Ciidamada Puntland oo dhaq dhaqaaq Ciidan ka wada Sool | Dayniile.com
Ciidamada Puntland oo dhaq dhaqaaq Ciidan ka wada Sool
Jan. 12 WARKA MAANTA Comments Off on Ciidamada Puntland oo dhaq dhaqaaq Ciidan ka wada Sool
Sool-RisaalaFM- Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in maanta Ciidamada Maamulka Puntland ay Gobolkaasi ka wadaan dhaq dhaqaaq Ciidan.
Ciidamo hubeysan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa ka baxay magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe, kuwaasi oo dadka degaanka ay soo sheegayaan in ay aad u hubeysan yihiin.
Dadka degaanka ayaa inoo sheegay Ciidamda Puntland in ay afka saareen dhanka degaanka Tukaraq oo ay ku sugan yihiin Ciidamda maamulka Somaliland, ayna ka cabsi qabaan in markale uu dhaco dagaal kale.
Siddeedii bishan Ciidamada Maamulka Puntland oo gacanta ku hayay degaanka Tukaraq iyo Ciidamda Somaliland ayaa waxa ay ku dgaalaameen degaankaasi, taasi oo sababtay in Ciidamada Puntland laga fara maroojiyo degaanka, dagaalkaasi wuxuu geystay khasaare kala duwan.
Ciidamada Somaliland ayaa wali gacanta ku haya degaanka Tukaraq iyo sidoo kale degaanada hoos yimaada, waxaana Puntland ay doonaysaa in ay gacanteeda ku soo celiso degaankaasi oo fariisin u ahaa ciidamada Puntland.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa sheegay 8-dii bishan Ciidamo laga soo abaabulay magaalada Hargeysa in ay duulaan ku soo qaadeen degaanka Tukaraq oo ka tirsan Gobolka Sool, wuxuuna sheegay dagaalka inuu ku soo aaday xilli booqasho uu Puntland ku joogo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed (Farmaajo).
Wuxuu sheegay Madaxweyne (Gaas) in Puntland iyo shacabkeeda ay ku filan yihiin difaaca dhulkooda, wuxuuna shacabka ku sugan gudaha iyo dibadda ee Puntland ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan difaaca dhulkooda.
Somaliland ayaa dhankeeda sheegtay goor sii horeysay in Puntland ay dhowr jeer ku soo qaaday Weeraro daandaansi ah.
← Sheekh Shaakir oo magacaabay Guddiga Amniga
Farmaajo oo Boosaaso kula kulmaya qeybaha bulshada →